matv: Sary ahetsika asolo ny sarimihetsika
2008-10-21 @ 09:25 in Kolontsaina
Tena mifaninana sy mitady fandaharana vaovao hatrany ny haino indrindra fa ny JERY eto Madagasikara. Efa mahazatra antsika ohatra, noho ny hala tahaka avy amin'ny reny malala mba ho amin'ny valo ora alina ny vaovao amin'ny alina amin'ny ankamaroan'ny fahitalavitra eto an-drenivohitra. Efa ifaninanana ihany koa ny mandefa fandaharan-kolotsaina avy eo Madagasikara na tontosaina eto Madagasikara isaky ny faran'ny herinandro. Fa ity an'ny matv ity indray no hafa.
matv na madagascar television moa no fahitalavitra tsy miankina ara-dalana nijoro voalohany indrindra eto Madagasikara nefa tsy voatery ho izy no be mpanaraka indrindra. Ny rta aloha no manana ny lazany indrindra hatramin'izao araka ny fijeriko azy na dia tsy mpanaraka azy io loatra aza aho. Ny tena marina moa dia tsy mpijery fahitalavitra loatra ankoatra ny vaovao tsindraindray angaha aho. Fa inona aloha ilay hafa ataon'ny madagascar television?
Matetika aorian'ny vaovao alina dia oronantsarimihetsika no alefan'ny televiziona amin'ny ankapobeny. Lahatsaripika tena sariolona sy tanàna nopihina mitohy fa tsy sary novolavolaintanana na tamin'ny alalan'ny computer. Mba ho karazana fitarihandalana ary dia sary ahetsika (déssin animé) indray no hitako nalefan'ny matv tamin'ny zoma sy ny sabotsy alina aorian'ny vaovao. Tsy fantatro ny andro manaraka fa tsikaritra ihany io. Sary ahetsika mpandeha amin'ny ora iasana ihany fa mety tsy ho hitan'ny olondehibe (mihoatra ny 25 taona) noho ny anton-draharaha. Tahaka ny mampihomehy ny mieritreritra ilay izy saingy fantatra tsara kosa fa be amin'ny olondehibe no mpakafy sary ahetsika... fa ilay mahatsikaiky aloha no tena ankafiziny e!